Sidee Farmaajo loogu soo dhoweeyey Addis (Sawiro) - Caasimada Online
Home Warar Sidee Farmaajo loogu soo dhoweeyey Addis (Sawiro)
Sidee Farmaajo loogu soo dhoweeyey Addis (Sawiro)
Addis Ababa (Caasimada Online)-Madaxweynaha JFS Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa gaaray magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia.
Madaxweynaha ayaa waxaa Magaalada Addis Ababa kusoo dhaweeyay Madaxweynaha dowlad Degaanka Soomaalida Mustafe Maxamed Cumar iyo Wasiirka Warfaafinta dowlada Ethiopia.
Madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa halkaas uga qeyb galaya shir Madaxeedka Urur Goboleedka IGAD.
Hoggaamiyeyaasha IGAD ayaa iska xog-wareysanaya qorsheyaasha lagu guuleystay ee ku aadan dhameystirka heshiiska lagu soo afjarayo colaada iyo dib-u-soo celinta nabadda dalka Koonfurta Suudaan.
Iyadoona Guddi Madaxeedka loo xil saaray arrinkan laga dhageysan doono warbixin ku saabsan qodobbadii laga fuliyey heshiisyadii hore iyo caqabadaha haatan jira.
Sidoo kale, Madaxweynaha ayaa kulan la qaatay Madaxweynaha dowlad Degaanka Soomaalida Mustafe Maxamed Cumar, waxa ayna kawada hadleen xaalada dhulka Soomaalida, iyadoo Farmaajo uu ku taliyay in la xasiliyo jawiga.
Labada dhinac ayaa ka wada hadlay iskaashiga amaanka,horumarka iyo horumarinta dadaallada nabadda ee ka socda Geeska Afrika.